खेलकुद Archives - Sansar Dainik
October 10, 2020 adminLeaveaComment on यो हो १९ बर्षिय युवतिले बनाएको ब’ला’त्का’र हुनबाट बचाउने पे’न्टी,जसले पुलिसलाई आफै फोन लगाउछ (भिडियो)
काठमाडौ – भारतकी एक युवतीले यस्तो पे’न्टी बनाएकी छिन्, जसले युवतीहरुलाई ब’लात्का’रबाट ब’चाउन सक्छ । १९ वर्षकी सीनू कुमारी उत्तर प्रदेशको र्फरुखाबाद जिल्लाको एक निम्न मध्यमवर्गीय परिवारका हुन् । उनले बनाएको ‘रे’प प्रुफ पे’न्टी’मा एक प्रकारको लग लागेको हुन्छ, जसले ब’लात्का’र बाट बचाउनसक्छ । ब्ले’ड प्रु’फ कपडा प्रयोग गरिएको छ, जसलाई का’ट्न वा जलाउन सकिँदैन […]
August 16, 2020 adminLeaveaComment on CRISTIANO RONALDO
Cristiano Ronaldo complete name is Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro.He was conceived on5february,1985.He was conceived on Medical clinic Dr Nelio Mendonca Funchal,portugal.His father name is Jose Dinis Aveiro.His mother name was Maria Dolores Dos Santos Aveiro.His sibling name Hugo Aveiro.His little girl name is Eva Maria Dos Santos Aveiro. His pastimes are gathering […]
अस्ट्रेलियन टिममा तीन नयाँ अनुहार
August 14, 2020 adminLeaveaComment on अस्ट्रेलियन टिममा तीन नयाँ अनुहार
एजेन्सी तीन नयाँ अनुहारलाई समेट्दै आगामी महिनादेखि इङ्ग्ल्यान्ड भ्रमण निस्कने २१ सदस्यीय अस्ट्रेलियन टोलीको घोषणा भएको छ । आरोन फिंच कप्तान रहने टोलीमा जोस फिलिप, राइली मेरिडिथ तथा डानियल साम्सले पहिलोपटक स्थान बनाएका छन् । ग्लेन म्याक्सबेल, नाथन लायन तथा मार्कस स्टोइनिसले पनि टोलीमा पुनरागमन गरेका छन् । अस्ट्रेलियाले इङ्ग्ल्यान्ड भ्रमणका क्रममा ३ एकदिवसीय तथा […]
August 13, 2020 adminLeaveaComment on इन्टरनेटमा पो’र्न फिल्म हेर्दै थिए, आफ्नै श्रीमतीलाई देखेपछि…….
एक व्यक्तिले घरमै बसेर अनलाइनमा ए’डल्ट फिल्म हेर्दै थिए कि अचानक उनको हो श उड्यो, उनले त्यस भिडियोमा जुन महिला अर्कै पुरुषसँग सम्बन्ध बनाइरहेकी थिइन् उनी उनकी पत्नी थिइन् । यो भिडियो देखेपछि उनले श्रीमतीलाई छोडिदिए । महिला डाक्टर हुन् भने पति सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन् । महिला अक्सर पतिलाई पो’र्न फिल्म हेर्न द’बाब दिन्थिन् । […]
महिला र एक्लै यौ’नसु’ख ?
July 11, 2020 adminLeaveaComment on महिला र एक्लै यौ’नसु’ख ?
महिला र पुरूष बीच शारी’रिक स’म्पर्क गरेर यौ’न स’न्तुष्टि लिने प्र’क्रिया सहज प्रक्रिया हो तर सधैँ यो सम्भव हुन्न । विवाह पछिको अवस्थामा समेत श्रीमान्–श्रीमती सधैँ सँगै नहुन सक्छन् । हाम्रो समाजमा विवाहअगाडि शारी’रिक स’म्पर्कको मा*ध्यमबाट यौ’न सन्तु’ष्टि लिनु सामाजिक रुपमा समेत ज’टिल छ । यो प्राकृतिक नियम नै हो । विवाहित हुन् या एक्लो […]
‘विनादर्शक ट्रफी उचाल्दा अनौठो हुनेछ’
June 1, 2020 adminLeaveaComment on ‘विनादर्शक ट्रफी उचाल्दा अनौठो हुनेछ’
एजेन्सी । विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएका खेलकुद गतिविधिहरू पुनः सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । यसै क्रममा जर्मन बुन्डेस लिगाले आफ्नो तेस्रो साताका खेलहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । स्पेनिस ला लिगा जुन ८ बाट सुरु हुँदै छ । उता प्रिमियर लिग फुटबल पनि सुरु हुने तयारीमा छ । सबै लिग सुरु […]
June 1, 2020 adminLeaveaComment on खाली रंगशालामा खेल्ने कुरा अजीब लागिरहेको छ – मेसी
June 1, 2020 adminLeaveaComment on ज्लाटनलाई चोट
एजेन्सी मिलान । स्विडिस तथा इटालियन क्लब एसी मिलानका भेट्रान फरवार्ड ज्लाटन इब्राहिमोभिचले अभ्यास दौरान गम्भीर चोट बोकेका छन् । सोमबार प्रशिक्षण दौरान ज्लाटनले एचिलेस चोट बोकेका हुन् । रिपोर्टअनुसार ज्लाटनको खुट्टाको चोट गम्भीर रहेको छ । स्पेनिस पत्रिका मार्काका अनुसार म्यानचेस्टर युनाइटेडका पूर्वफरवार्ड इब्राको एचिलेस टन्डन फुटेको र उनी लामो समय मैदानबाहिर हुन सक्ने […]